मेरो काम मुर्छित सपना जगाउनु नै थियोः प्रधानमन्त्री ओली
असोज ३, काठमाडौँ । बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शहर्मा ओलीले संविधान दिवसको अवसरमा आफू र आफ्नो दल फगत सपनाका सौदागर नभएको बताए ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकमा विकासका लागि जग बनेको र अब विकासले तीव्रता पाउने बताएका छन् । संविधान दिवस मुल समारोह समितिले काठमाडौँको टुडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्...
असोज २, २०७६ कहिलेकाहीँ डरलाग्दो सपना देख्नु सामान्य हो । तर, नियमित रूपमा डरलाग्दो सपना आउन थाल्यो भनेचाहिँ सजग हुन आवश्यक हुन्छ । यसलाई मानसिक रोगका रूपमा लिनुपर्छ । यस्तो भएमा उपचारको जरुरत पर्...
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा विकासका लागि जग बनेको र अब विकासले तीव्रता पाउने बताएका छन् । संविधान दिवस मुल समारोह समितिले काठमाडौको टुडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै...
काठमाडौँः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोध्नेहरूले विकासका सपना किन देखाएको भने पनि आफूले मुर्छित सपनामा पानी छर्किएको बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसरका आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सपन...
संविधान दिवस: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, 'मैले मुर्छित सपनामाथि पानी छम्केकै हुँ'
bbc.com . ९ महीना अघि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा विकासका लागि आफूले देखाएको सपनाको प्रतिरक्षा गरेका छन्। संविधान र राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमा शुक्रवार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन ...
‘मैले मुर्छित सपनामाथि पानी छम्केकै हुँ’
३ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शहर्मा ओलीले आफू र आफ्नो दल फगत सपनाका सौदागर नभएको बताएका छन् । सकियो, भत्कियो, अक केही हुन्न भन्ने मनस्थिति फेर्न र अब केही हुन्छ भन्ने आफूहरले जनतामा आशनाक...
खै रेल, खै पानीजहाज? प्रश्नकर्तालाई प्रधानमन्त्री भन्छन् ‘मैले मुर्छित सपनामाथि पानी छम्केकै ह�
bizmandu.com . ९ महीना अघि
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोध्नेहरूले विकासका सपना किन देखाएको भने पनि आफूले मुर्छित सपनामा पानी छर्किएको बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसरका आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सप...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने– मैले मूर्छित सपनामाथि पानी छर्किएको हुँ
farakdhar.com . ९ महीना अघि
काठमाडौं— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोध्नेहरुले अनेक प्रश्न सोधे पनि आफूले मूर्छित सपनामाथि पानी छर्किएको बताएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा सैनिक मन्च टुँडिखेलमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री क...
असोज २, २०७६ काठमाडौं— हामी सपना किन देख्छौं र सपनाको के अर्थ लाग्छ भन्ने बारेमा हामी जिज्ञासु रहन्छौं । हाम्रो दिमाग सुतेपछि कसरी प्रोजेक्टर बन्न पुग्छ अनि आँखा कसरी स्क्रिन बन्न पुग्छ जसमा छविहर...
‘निराश भएका जनतामा मैले आशा देखाएको छु’ प्रधानमन्त्री
३ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानमा आफू र आफ्नो दलले फगत सपना मात्र नदेखेको त्यसलाई पुरा गर्ने मार्ग पनि देखेको बताएका छन् । आफुले देखेका सपना र योजनाल...